ဖရဲသီးနဲ့ ကျန်းမာလှပမှူ အရေးပါခြင်း ( ကျန်းမာပျော်ရွှင် ဝိတ်ကျချင်ရင် ဖရဲသီးကို စားပါ....) - SANTHITSA
ဖရဲသီးဟာ ရာသီစာသီးနှံ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် အချိန်မရွေး စားသုံးနိုင်နေပြီ… သူ့ရဲ့အကျိုးကို သိထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဖရဲသီးဟာ အသားအရေကို လှပမှူ ပေးရုံသာမက ကိုယ်တွင်း ကလီစာများရဲ့ ကျန်မာမှူကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဖရဲသီဆိုတာနဲ့ အခွံအသား အစေ့ပါမကျန် ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်လှပါတယ်။ ဘီတာမင် စီ ၊ အေ ၊ ဘီ နဲ့ ဇင့်ဓာတ် သံဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီး ရေဓာတ် ၉၂ ရာခိုင်နှူန်း ပါဝင်တဲ့အတွက် ကိုယ်တွင်းရှိ အဆိပ် အတောက်များကို ရှင်းလင်း သုတ်သင် ပေးနိုင်ပါတယ်။
အခုလို ဆောင်းနှောင်ရာသီက စတင်လို့ နွေရာသီ တစ်လျှောက်လုံးမှာ ဖရဲသီးကို ပေါပေါများများ ဝယ်ယူနိုင်တယ် မဟုတ်ပါလား။ ဖရဲသီးကနေ ဘယ်လို အကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပြီး ဘယ်လို အကျိုးများရဘို့ ဘယ်လို စားသုံးရင် ရနိုင်မလည်းဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်မယ်နော်….
ဘာအတွက်မှန်းမသိပဲ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို သင်မကြာမကြာ ခံစားနေရပြီဆိုရင် ဖရဲသီးဖျော်ရည်ကို
မနက်ပိုင်း မည်သည့်အစာမှ မစားခင်မှာ သကြားလက်ဘက်ရည် တစ်ဇွန်းလောက်နဲ့ ရောစပ်ပြီး သောက်သုံးပေးပါ… ခေါင်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာကို သက်သာ ပျောက်ကင်းကြောင်း သင် လက်တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။
ဝိန်လျော့ချင် သလား??? ဝလွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေပါ သလား???
သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ဝိတ်ချနည်းဟာ အမြန်ဆုံး ထိရောက်စေမှာပါ။ အစားစားချင်စိတ် မကြာခဏ ဖြစ်ဖြစ်လာပြီး ဆာလောင်မှူ ဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာ တခြားသောအစားအစာတွေကို မစားပဲ ဖရဲသီးကိုသာ စားသုံးပေးပါ။ အစာလည်းပြေစေပြီး ဝိတ်ကိုလည်း ထိန်းထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဖရဲသီးကို သကြားမထည့်ပဲ ကြိတ်ချေပြီး ဖျော်ရည်အဖြစ် မနက်ခင်းနဲ့ ညစာ မစား ခင်အချိန်တို့မှာ သောက်သုံးပေးပါ။
ဖရဲသီးအစေ့ဟာ သွေးတိုးသမားများအတွက် အလွန်ထိရောက်တဲ့ သွေးထိမ်း ဆေးပဲ ဖစ်ပါတယ်။
ဖရဲသီးအစေ့တွေကို နေလှန်းပြီး တစ်ရက်အကြာမှာ အတွင်းက အဆံများကို လက်ဘက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းစာ ထုတ်ယူပြီး ရေနွေးနဲ့ တစ်နာရီခန့် ပြုတ်ပါ။
သုံးခွက်တစ်ခွက်တင် ကျန်တဲ့အခါ အရည်ကို စစ်ပြီး မနက်ခင်းတိုင်း ဘာအစာမှ မစားခင် သောက်သုံးပေးပါ။ သွေးတိုးသမားများအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှူ အထူးရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖရဲသီးမှာ အမျှင်ဓာတ်၊ ရေဓာတ်တွေ များစွာပါဝင်တာမို့ ဂမ်းချုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဖရဲသီးကို နေ့လည်ခင်း အဆာပြေနဲ့ ညခင်းတွေမှာ စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ဝမ်းမှန်ခြင်းအကျိုးကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖရဲသီးဟာ ကျောက်ကပ်အတွက် အကျိုးများတဲ့ သီးနှံတစ်မျိားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်မပျော်သူတွေ သတိမေ့လျော့တတ်သူတွေအတွက် ဖရဲသီးက အကောင်းဆုံး အားတိုးဆေး တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖရဲသီးအစေ့မှာ ပရိုတင်း၊ အက်မီနိုအက်စစ်၊ သံဓာတ်၊ ဇင့်ဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင်ဘီ စတဲ့ဓာတ်တွေ များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်း အစားအစာ မစားရသေးခင်မှာ ဖရဲသီး စားသုံးပေးခြင်းသည် ကျောက်ကပ်အား သဘာဝနည်းအရ သန့်စင် ဆေးကြောပေးခြင်းနှင့် တူပေ၏။
ဖရဲသီးအခွံမှ အဖြူသားကို ကျောက်တည်သူများ စားသုံးပေးပါက ကျောက်ကျေနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းယာစားတတ်သူများနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖရဲသီးဟာ မှတ်ဉာဏ်အားကို သိသိသာသာ ကောင်းမွန်စေတာမို့ ကလေးငယ်များနဲ့ရော အသက်အရွယ်ကြီးသူများအတွက်ပါ သင့်တော်လှပါတယ်။ မနက်ပိုင်း ဘာအစာမှ မစားရသေးခင် ဖရဲသီးအစေ့ရဲ့ အတွင်းအဆံကို လေးငါးစေ့လောက် စားသုံးပေးရုံမျှနဲ့ မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုမိုအားကောင်းလာတာကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာပျော်ရွှင် ဝိတ်ကျချင်ရင် ဖရဲသီးကို စားပါ….
ဖရဲသီးနဲ့ ကနျြးမာလှပမှူ အရေးပါခွငျး ( ကနျြးမာပြျောရှငျ ဝိတျကခြငျြရငျ ဖရဲသီးကို စားပါ….)
ဖရဲသီးဟာ ရာသီစာသီးနှံ တဈမြိုးဖွဈပွီး အခုဆိုရငျ အခြိနျမရှေး စားသုံးနိုငျနပွေီ… သူ့ရဲ့အကြိုးကို သိထားဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။ ဖရဲသီးဟာ အသားအရကေို လှပမှူ ပေးရုံသာမက ကိုယျတှငျး ကလီစာမြားရဲ့ ကနျြမာမှူကိုလညျး ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။
ဖရဲသီဆိုတာနဲ့ အခှံအသား အစပေ့ါမကနျြ ကနျြးမာရေးအတှကျ အသုံးဝငျလှပါတယျ။ ဘီတာမငျ စီ ၊ အေ ၊ ဘီ နဲ့ ဇငျ့ဓာတျ သံဓာတျတှေ ပါဝငျပွီး ရဓောတျ ၉၂ ရာခိုငျနှူနျး ပါဝငျတဲ့အတှကျ ကိုယျတှငျးရှိ အဆိပျ အတောကျမြားကို ရှငျးလငျး သုတျသငျ ပေးနိုငျပါတယျ။
အခုလို ဆောငျးနှောငျရာသီက စတငျလို့ နှရောသီ တဈလြှောကျလုံးမှာ ဖရဲသီးကို ပေါပေါမြားမြား ဝယျယူနိုငျတယျ မဟုတျပါလား။ ဖရဲသီးကနေ ဘယျလို အကြိုးတှေ ရရှိနိုငျပွီး ဘယျလို အကြိုးမြားရဘို့ ဘယျလို စားသုံးရငျ ရနိုငျမလညျးဆိုတာ ဖျောပွပေးလိုကျမယျနျော….
ဘာအတှကျမှနျးမသိပဲ ခေါငျးကိုကျဝဒေနာကို သငျမကွာမကွာ ခံစားနရေပွီဆိုရငျ ဖရဲသီးဖြျောရညျကို
မနကျပိုငျး မညျသညျ့အစာမှ မစားခငျမှာ သကွားလကျဘကျရညျ တဈဇှနျးလောကျနဲ့ ရောစပျပွီး သောကျသုံးပေးပါ… ခေါငျးကိုကျခွငျးဝဒေနာကို သကျသာ ပြောကျကငျးကွောငျး သငျ လကျတှမွေ့ငျနိုငျမှာပါ။
ဝိနျလြော့ခငျြ သလား??? ဝလှနျးလို့ စိတျညဈနပေါ သလား???
သငျ့အတှကျ အကောငျးဆုံး ဝိတျခနြညျးဟာ အမွနျဆုံး ထိရောကျစမှောပါ။ အစားစားခငျြစိတျ မကွာခဏ ဖွဈဖွဈလာပွီး ဆာလောငျမှူ ဖွဈပျေါလာခြိနျမှာ တခွားသောအစားအစာတှကေို မစားပဲ ဖရဲသီးကိုသာ စားသုံးပေးပါ။ အစာလညျးပွစေပွေီး ဝိတျကိုလညျး ထိနျးထားနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဖရဲသီးကို သကွားမထညျ့ပဲ ကွိတျခပြွေီး ဖြျောရညျအဖွဈ မနကျခငျးနဲ့ ညစာ မစား ခငျအခြိနျတို့မှာ သောကျသုံးပေးပါ။
ဖရဲသီးအစဟေ့ာ သှေးတိုးသမားမြားအတှကျ အလှနျထိရောကျတဲ့ သှေးထိမျး ဆေးပဲ ဖဈပါတယျ။
ဖရဲသီးအစတှေ့ကေို နလှေနျးပွီး တဈရကျအကွာမှာ အတှငျးက အဆံမြားကို လကျဘကျရညျဇှနျး နှဈဇှနျးစာ ထုတျယူပွီး ရနှေေးနဲ့ တဈနာရီခနျ့ ပွုတျပါ။
သုံးခှကျတဈခှကျတငျ ကနျြတဲ့အခါ အရညျကို စဈပွီး မနကျခငျးတိုငျး ဘာအစာမှ မစားခငျ သောကျသုံးပေးပါ။ သှေးတိုးသမားမြားအတှကျ အကြိုးသကျရောကျမှူ အထူးရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဖရဲသီးမှာ အမြှငျဓာတျ၊ ရဓောတျတှေ မြားစှာပါဝငျတာမို့ ဂမျးခြုပျခွငျးကို ကာကှယျပေးပါတယျ။
ဖရဲသီးကို နလေ့ညျခငျး အဆာပွနေဲ့ ညခငျးတှမှော စားသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ ဝမျးမှနျခွငျးအကြိုးကို ရရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဖရဲသီးဟာ ကြောကျကပျအတှကျ အကြိုးမြားတဲ့ သီးနှံတဈမြိားပဲ ဖွဈပါတယျ။ အိပျမပြျောသူတှေ သတိမလြေ့ော့တတျသူတှအေတှကျ ဖရဲသီးက အကောငျးဆုံး အားတိုးဆေး တဈလကျဖွဈပါတယျ။
ဖရဲသီးအစမှေ့ာ ပရိုတငျး၊ အကျမီနိုအကျစဈ၊ သံဓာတျ၊ ဇငျ့ဓာတျနဲ့ ဗီတာမငျဘီ စတဲ့ဓာတျတှေ မြားစှာ ပါဝငျပါတယျ။ မနကျပိုငျး အစားအစာ မစားရသေးခငျမှာ ဖရဲသီး စားသုံးပေးခွငျးသညျ ကြောကျကပျအား သဘာဝနညျးအရ သနျ့စငျ ဆေးကွောပေးခွငျးနှငျ့ တူပေ၏။
ဖရဲသီးအခှံမှ အဖွူသားကို ကြောကျတညျသူမြား စားသုံးပေးပါက ကြောကျကနြေိုငျပါတယျ။ ကှမျးယာစားတတျသူမြားနဲ့ အသငျ့တျောဆုံးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဖရဲသီးဟာ မှတျဉာဏျအားကို သိသိသာသာ ကောငျးမှနျစတောမို့ ကလေးငယျမြားနဲ့ရော အသကျအရှယျကွီးသူမြားအတှကျပါ သငျ့တျောလှပါတယျ။ မနကျပိုငျး ဘာအစာမှ မစားရသေးခငျ ဖရဲသီးအစရေဲ့ အတှငျးအဆံကို လေးငါးစလေ့ောကျ စားသုံးပေးရုံမြှနဲ့ မှတျဉာဏျပိုငျးဆိုငျရာ ပိုမိုအားကောငျးလာတာကို တှမွေ့ငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကနျြးမာပြျောရှငျ ဝိတျကခြငျြရငျ ဖရဲသီးကို စားပါ….
Total Hits : 2098096